Isicelo se-Visa yaseNdiya | Isicelo se-India Visa | India Visa Online
I-India Tourist Visa Ivulwa Kabusha
Ukubuyekezwa Kwenqubomgomo Ye-Visa yaseNdiya
«Isihloko Esedlule Isihloko Esilandelayo »
Yini i-India Visa Isicelo?
Uhulumeni waseNdiya udinga ukuthi bonke abantu bakwamanye amazwe abafuna ukungena eNdiya, balethe Isicelo se-Indian Visa. Le nqubo yokufaka isicelo ingenziwa ngokuvakashela inxusa laseNdiya noma ngokugcwalisa India Visa Isicelo online kule website.
Isicelo se-India Visa ukuqala kwenqubo yokuthola umphumela wesinqumo se-India Visa. Isinqumo se-Indian Visa ngobuningi bamacala siyathandeka kulabo abafaka isicelo.
Ngubani odinga ukugcwalisa i-India Visa Isicelo?
Labo bavakashi abeza eNdiya njengezivakashi, noma ngezinjongo zezentengiso noma zokwelashwa bangangenisa kanye nesicelo se-Indian Visa online bese kucatshangelwa ukungena India. Ukuqedela uhlelo lokusebenza lwe-India Visa uqobo ngokwalo akunikeli ngokuzenzakalelayo ukungena ku-India.
Iziphathimandla zabokufika eziqokwe nguHulumeni waseNdiya zinquma umphumela weSicelo se-India Visa ngokususelwa kulwazi olunikezwe abafaka izicelo kanye namasheke abo angaphakathi angaphakathi.
Abahambi abaya e-India beza ngaphansi koku-1 kwe Uhlobo lwe-Visa oluchazwe lapha kudingeka ugcwalise i-India Visa Isicelo.
I-Indian Visa Isicelo online noma i-eVisa India iyatholakala ngaphansi kwale mikhakha ebanzi:
I-India eTourist Visa
I-India eBusinss Visa
I-India eMedical Visa
I-India eMedical Attendant Visa
Yiluphi ulwazi oludingekayo kuhlelo lokusebenza lwe-Indian Visa?
Ifomu ngokwalo licacile futhi kulula ukuligcwalisa ngemizuzu embalwa. Kunolwazi oludingekayo kulabo abafaka isicelo ngaphansi kwezigaba ezinkulu ezilandelayo:
Imininingwane ye-Biographic yomhambi.
Umlando wobelelesi owedlule.
Imininingwane eyengeziwe iyadingeka kuya ngohlobo lwe-visa.
Ikhophi yesithombe sobuso nekhophi yepasipoti iyabuzwa ngemuva kokuthi inkokhelo yenziwe.
Kufanele ngisigcwalise nini i-India Visa Isicelo?
Kufanele ugcwalise Isicelo se-Indian Visa okungenani izinsuku ezi-4 ngaphambi kokungena kwakho eNdiya. I-Visa yaseNdiya ingathatha izinsuku ezi-3 kuye kwezi-4 ukuze ivunyelwe, ngakho-ke kuhle ukufaka isicelo ezinsukwini ezi-4 zebhizinisi ngaphambi kokungena eNdiya.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuqeda i-Indian Visa application?
Thatha isicelo se-India Visa 3-5 imizuzu yokuqeda ngaphambi kokwenza inkokhelo ye-inthanethi. Ngemva kokuba inkokhelo isiqediwe, kuye ngobuzwe bomuntu ofake isicelo kanye nenjongo Yokuvakashela, umfakisicelo angase acelwe ulwazi olwengeziwe.
Lolu lwazi olwengeziwe nalo luqedwa ngo 2-3 imizuzu. Uma kukhona izinkinga ekugcwaliseni isicelo se-inthanethi, ungathinta Ideski Losizo kanye nethimba Lokusekela Abathengi kule webhusayithi usebenzisa Xhumana nathi isixhumanisi.
Yiziphi izimfuno zangaphambili noma izidingo zokugcwalisa uhlelo lokusebenza lwe-India Visa online?
a) Isidingo sepasipoti noma ubuzwe:
Kufanele ube ngowe-1 kwalokhu amazwe afanelekayo evunyelwe uHulumeni waseNdiya ukuba eVisa India kufanelekile.
b) Inhloso yesidingo:
Okunye okudingekayo kusengaphambili kokugcwalisa Isicelo se-India Visa online siza nge-1 yalezi zinhloso ezilandelayo:
Ukuhambela izinhloso zeTourism, Ukuhlangana Komndeni Nabangane, Uhlelo lwe-Yoga, Ukubona ngokubona, Umsebenzi Wokuzithandela weThemu Elifushane.
Ukuza ngebhizinisi neHambo Lokuhweba, Ukuthengisa nokuThenga Izimpahla noma Izinsizakalo, Ukuhambela izinkambo, Ukuhambela imihlangano, Fairs Yezentengiselwano, Amasemina, Inkomfa noma yimuphi omunye umsebenzi weZimboni, wezohwebo.
Ukwelashwa ngokwezokwelashwa komuntu noma osebenza njengoMeluleki Wezokwelapha kumuntu ophathwa ukwelashwa.
c) Ezinye izicelo zangaphambili:
Ezinye izidingo ngaphambi kokuqeda i-India Visa Isicelo online yilezi:
Iphasiphothi esebenza izinyanga eziyi-6 ngesikhathi sosuku lokungena eNdiya.
Iphasiphothi enayo 2 amakhasi angenalutho ukuze isikhulu sezokufika sikwazi ukusigxiviza esikhumulweni sezindiza. Qaphela, ukuthi i-India Visa elethwe ngemuva kokugcwalisa Isicelo se-India Visa online ayidingi ukuthi uvakashele inxusa laseNdiya ukuze unamathisele isitembu se-Visa. 2 amakhasi angenalutho ayadingeka esikhumulweni sezindiza ukuze ungene futhi uphume isitembu sepasipoti yakho.
Indlela yokukhokha efana nesheke, ikhadi lemali, ikhadi lesikweletu noma i-Paypal.
Ngingakwazi ukufaka iqembu noma umndeni India Visa Isicelo?
Isicelo se-India Visa, kungakhathalekile ukuthi imodi yokuqedelwa injani, noma ngabe ikwi-Intanethi noma kwiNxusa laseNdiya, idinga ukuqedelwa umuntu ngamunye ngokwahlukile kungakhathalekile iminyaka yakhe. Alikho ifomu lesicelo se-Indian Visa Isicelo seqembu elikhona sendlela eku-inthanethi noma engaxhunyiwe ku-inthanethi.
Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi kufanele ufake isicelo somuntu ngamunye kwiphasiphothi yakhe, ngakho-ke ukuzalwa okusha nakho ngeke kuhamba kwipasipoti yomzali noma umnakekeli wakhe.
Kwenzekani ngemuva kokuphothula isicelo se-Indian Visa?
Lapho isicelo se-Visa yaseNdiya seyithunyelwe iyaqhubeka nokusebenza esikhungweni sikaHulumeni waseNdiya. Abahambi bangabuzwa imibuzo eyengeziwe noma ukucaciseleka okuphathelene nohambo lwabo noma banganikezwa i-Visa yaseNdiya ngaphandle kokucaciswa okwengeziwe.
Eminye yemibuzo ejwayelekile ebuziwe ihlobene nenhloso yohambo, indawo yokuhlala, ihhotela noma ireferensi eNdiya.
Uyini umehluko phakathi kwe-India Visa Online Isicelo kanye nePhepha Isicelo?
Awukho umehluko phakathi kwe 2 izindlela ngaphandle kokuhluka okuncane okuncane.
I-Indian Visa Isicelo Online iyindawo yokuhlala yezinsuku ezingama-180 kuphela.
I-Indian Visa Isicelo Online efayelwe i-Visa yabavakashi iyenzelwe iminyaka emi-5.
I-Indian Visa Isicelo Online ivunyelwe ngezinhloso ezilandelayo:
Inhloso yokuvakasha kwakho ukuze wakhe izimboni eziyizimboni.
Uza ukuzosungula, ukulamula, ukuqeda noma ukuqhubeka ngebhizinisi.
Ukuvakasha kwakho ukuthengisa into noma insizakalo noma umkhiqizo eNdiya.
Udinga umkhiqizo noma insizakalo evela eNdiya futhi uhlose ukuthenga noma ukuthenga noma ukuthenga okuthile okuvela eNdiya.
Ufuna ukwenza umsebenzi wokuhweba.
Udinga ukuqasha abasebenzi noma abasebenzi abavela eNdiya.
Uhambela imibukiso noma i-fairs yezohwebo, imibukiso yezohwebo, izingqungquthela zebhizinisi noma ingqungquthela yebhizinisi.
Usebenza njengesazi noma uchwepheshe wephrojekthi entsha noma eqhubekayo eNdiya.
Ufuna ukuhambela izinkambo eNdiya.
Unokucebisa / izinto ongakuhambisa ekuvakasheni kwakho.
Uza Kwezokwelashwa noma uhamba nesiguli esiyeza ezokwelashwa.
Uma inhloso yohambo lwakho kungeyona eyoku-1 kwalokhu okungenhla kufanele ufake isicelo esisekelwe ephepheni, esivamile se-Indian Visa Application okuyinqubo eyisicefe futhi ethatha isikhathi eside.
Yiziphi izinzuzo zokugcwalisa i-Indian Visa Isicelo online?
Izinzuzo zohlelo lwe-Indian Visa Isicelo online okulandelayo:
I-Visa ihanjiswa nge-imeyili ngogesi, yingakho igama le-eVisa (Visa kagesi).
Ukucaciswa okwengeziwe nemibuzo kubuzwa nge-imeyili futhi akudingi ukuthi kube nodliwano-ndlebe kwi-Indian Embassy noma kwi-Consadors.
Inqubo ishesha futhi iqeda ezimweni eziningi emahoreni angama-72.
Ngabe udinga ukuvakashela amanxusa aseNdiya lapho uqeda ukufaka isicelo se-India Visa online?
Cha, awudingeki ukuthi uvakashele i-Indian Embassy noma i-Indian High Commission ngemuva kokuphothula isicelo se-Indian Visa online.
I-Visa ye-elekthronikhi ozoyinikwa, izoqoshwa ohlelweni lwekhompyutha. Uyacelwa ukuthi ugcine ikhophi elithambile ocingweni lwakho noma uma kwenzeka ibhethri lakho lisafa, kungakuhle ukugcina ukuphrinta ikhophi ephepheni ye-Indian Visa yakho ye-elektroniki noma i-eVisa India. Ungaya esikhumulweni sezindiza ngemuva kokuthola i-eVisa yaseNdiya.
Kungenziwa kanjani ukukhokhwa kwe-Indian Visa Isicelo online?
Kunezimali ezingaphezu kwe-133 ezamukelwe kule webhusayithi. Ungakhokha ku-inthanethi, noma ngesheke emazweni athile, ngo-Debit Card, ngeKhadi lesikweletu noma nge-Paypal.
KUFANELE UNGENZILE nini isicelo se-Indian Visa Isicelo online?
Kunezimo lapho ufanelekela ngaphansi kwalezi zindlela zombili kepha unganikezwa i-eVisa India noma i-Indian Online visa uma lokhu okungezansi kusebenza kuwe.
Ufaka isicelo ngaphansi kwepasipoti yokunxusa esikhundleni sepasipoti ejwayelekile.
Uhlose ukwenza imisebenzi yobuntatheli noma wenze amafilimu eNdiya.
Uza ngenjongo yokushumayela noma umsebenzi wezithunywa zevangeli.
Uza ukuvakasha isikhathi eside ngaphezulu kwezinsuku ezingama-180.
Uma okunye kwalokhu okusebenzayo kusebenza kuwe kufanele ufake isicelo sephepha elijwayelekile / i-visa evamile yaseNdiya ngokuvakashela i-Indian Embassy / Consadors noma i-Indian High Commission.
Yini imikhawulo ye-India Visa Isicelo online?
Uma ufanelekile ukuthola i-eVisa India futhi uthathe isinqumo sokugcwalisa i-Indian Visa Isicelo Online, kuzodingeka uqaphele ukulinganiselwa.
I-Indian Visa ezolethwa kuwena ngemuva kokuqeda Isicelo se-India Visa Online noma i-eVisa India Isicelo sitholakala kuphela izikhathi ezi-3 kuphela ngezinjongo zabavakashi, Usuku lwama-30, unyaka ongu-1 kanye neminyaka emi-5.
I-India Visa Isicelo ese-inthanethi esigcwalisiwe sizokunikeza iVisa lebhizinisi laseNdiya lesikhathi esisodwa sonyaka ongu-1 nokungena okuningi.
I-Medical Visa etholwe nge-Indian Visa Application Online noma i-eVisa India itholakala izinsuku ezingama-60 ngezinjongo Zokwelashwa. Ivumela ukungena oku-3 eNdiya.
I-India Visa Application Online ekunika i-eVisa yaseNdiya, izovunyelwa isethi elinganiselwe yamachweba wokungena ngendiza, Izikhumulo Sezindiza ezingama-28 kanye namachweba angama-5. Uma uhlela ukuvakashela i-India ngomgwaqo, khona-ke akufanele ufake isicelo se-visa ukuya eNdiya usebenzisa le webhusayithi usebenzisa indlela ye-India Visa Isicelo online.
I-eVisa India etholwe ngokugcwalisa uhlelo lokusebenza lwe-Indian Visa online ayifanelekile ukuhambela izindawo zokuhlaselwa ngamasosha. Udinga ukufaka isicelo semvume yendawo evikelwe kanye / noma nemvume yendawo ekhawulelwe.
I-Electronic Visa yaseNdiya iyindlela eshesha kakhulu yokungena eNdiya uma uhlela ukuvakasha ngesikebhe noma ngendiza. Uma ungowe-1 kwamazwe ayi-180 afanelekayo e-eVisa India kanye nenhloso efanayo njengoba kuchaziwe ngenhla, ungafaka isicelo se-India Visa online kule webhusayithi lapha.
Uyacelwa ukuthi ufake isicelo se-India Visa ezinsukwini ezi-4-7 ngaphambi kwendiza yakho.
India eVisa Isicelo
IMIDANSO YASENDIYA EYODUMO
AMABHINDI ASENDIYA ODUMILE
UMHLAHLANDLELA WEZOKUVAKASHA OYA E-MEGHALAYA
KUMELE UBONE ININGIZIMU INDIYA
Umusho wokuzihlangula: I-Indian Visa ekhishwe yile webhusayithi yezentengiso isetshenziswa ngqo eHhovisi Likahulumeni Wezokufuduka laseNdiya. Uhulumeni waseNdiya akaqoka i-www.indiavisa-online.org ngokuqondile, ngokungaqondile noma ngokukhethekile. Inkokhelo yobungcweti ikhokhiswa izinkonzo zethu kanye ne-Government Visa Levy kulabo abafaka izicelo kule webhusayithi.